Intel iri kuvandudza kugoverwa kutsva kunoenderana neRakajeka Linux | Linux Vakapindwa muropa
Mune chinyorwa chakapfuura Takataura zvishoma nezvekuparadzirwa kweLinux mune iro boka rekuvandudza Intel riri kushanda, iyo yavanotarisira kuvhura yakaenzana sisitimu ye yavo Hardware uye zvirinani mashandiro ayo mukati meLinux ecosystem.
Nenzira imwecheteyo mukufanana Intel iri kushanda pane imwe kugoverwa kweLinux iyo yakavakirwa pa "Bvisa Linux", asi kugoverwa kweLinux uku hakusi kwekushandisa mudzimba, hofisi kana nharaunda dzedzidzo, asi asi ivo vanotarisira kusvika kune imwe ndima nazvo.
Imad Sosou, Mutevedzeri weMutungamiriri weIntel Software uye Services Group (SSG) uye General Manager weOpen Source Technology Center, ichangoburitswa chinyorwa chakanzi »Tsamba kune iyo indasitiri«, maanoshambadza Intel's yakakomba kuchengetedzeka kuvandudza.
Imad akadaro marobhoti paakatanga kushanda mufekitori uye mota dzisina mutyairi uye drones vanotanga kurova mugwagwa, chengetedzo inova yakakomba.
Vamwe vagadziri vanoda kuvaka masisitimu anoshanda (semaitiro chaiwo emadroni) kubva pakutanga kuzadzisa tarisiro yekuchengetedza, asi mhinduro dzakadai dzinodhura uye hadzigoneki.
Intel iri kushanda pane mhinduro yekuenderana, kugoverwa kweLinux iyo inogona kushandiswa kubva pamotokari dzisina mutyairi kuenda kune drones.
Iyi purojekiti inonzi "Intel® Kuchengetedza Kwakakosha Project yeLinux * OS". Nekudaro, Intel haisi kuvandudza kubva pakutanga, asi iri pamusoro pekugara kuri pachena kweLinux kugovera.
Kuchengetedza ndiko kutanga
Iyi purojekiti inobatsira vagadziri vezvimiririra uye chengetedzo-yakakosha masystem kutama kubva kuhurongwa hwakagadzirwa uchishandisa dzimwe nguva zviuru zvemacrocontroller uye mamwe magetsi emagetsi mayunitsi, kune iyo inoshandisa mukana wesimba, kuita uye chengetedzo yemazhinji-epakati mhinduro.
Neiyi nzira vanhu ve Intel inotarisira kusanganisira iyi panorama nyowani mukati mekatalog yayo, mune makambani mazhinji uye vezvemabhizimisi vatotanga kufarira uye kugadzira zvigadzirwa zvavo nemaitiro eizvi.
Imad Sousou anoti:
"Intel Safety Critical Project yeLinux * OS inoshanda kugadzirisa makakatanwa akakosha anotarisana neramangwana rekuchengetedza-rakakosha masisitimu, sekukanganisika kwemahombekombe mazhinji emhando yepamusoro, akakwidziridzwa akachengetedzwa pamwe neazvino zvigadziriso zvekuchengetedza, uye kugadzirisazve.
Kupa sosi yakachengetedzwa sosi yeinokosha Linux * anoshanda masystem, pamwe nematurusi maturusi nemaitiro ekununura akanyanya kudzoreka ekuchengetedza zvinyorwa
Izvi zvinobatsira nharaunda kukurumidza kuvandudza kwechengetedzo-yakakosha masisitimu.
Iyi Linux Chengetedzo Yakakosha Chirongwa yakavhurwa sosi purojekiti iyo inosanganisa yakanakisa yeLinux ecosystem pasi pehunyanzvi hwekuvandudza maitiro eiyo Yakajeka Linux * inoshanda sisitimu yeIntel Architecture.
Iyo purojekiti Rine-rakadzika ruzivo rwehardware uye chengetedzo humbowo uye ongororo raibhurari uyo anomuperekedza uye chii inopa zvivakwa zvekuvaka zvinodiwa kusangana pamwe nekuchengetedza masisitimu akagadzirira yehutano uye inoshanda yakachengeteka.
Imad inodaidzira Yakajeka Linux's yakanyanya otomatiki kufambiswa kwebasa uye nzira yekuburitsa, pamwe nekugadzirisirwa kwezvazvino Hardware mapuratifomu, ichiita sarudzo kwayo.
Chaizvoizvo, iyi Linux chengetedzo yakakosha chirongwa haisi yekuchinja Linux. Asi, chinangwa ndechekupa humbowo kutsigira iyo Linux, sezvazviri, inogona kushandiswa mune yekuchengetedza-yakakosha mamiriro uye kugadzirisa Linux pachayo munzira.
Humbowo ihwohwo hunozoenderana nekuyedzwa zvichipesana nematanho, semuenzaniso, iyo UNIX yakatarwa, vhezheni yechina uye iyo POSIX standard IEEE 4-1003.1, 2008 edition.
Nenzira iyi Imad inokoka avo vanofarira chirongwa ichi kuti vazive zvishoma uye kunyanya avo vanogona kubatsira kwariri kunyora nekutumira bvunzo.
Iwe unogona kutsvaga zvimwe zvakawanda nezve iyo projekiti uye kurodha pasi kana iwe uchida kuziva kana kupa kune iyo. Icho chinongedzo chinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Intel iri kuvandudza kugoverwa kutsva kunoenderana neRakajeka Linux
Bvisa Linux: kugoverwa kweLinux kwakagadzirwa neIntel